အရောင်ပိုနက်တဲ့ အာရှသားတို့ရဲ့ အရေပြား - Hello Sayarwon
အရောင်ပိုနက်တဲ့ အာရှသားတို့ရဲ့ အရေပြား
Dr. K Zin Thwe မှ ရေးသားသည်။ 08/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဥရောပမျိုးနွယ်စုနှင့်ဆန့်ကျင်စွာ အာဆီယမ်အရေပြားသည် ပိုအဆီများပြီး မယ်လနင်ပိုများများပါတတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရာသီဥတုလိုက်လျောမှုရှိအောင်နေရခြင်းနှင့် အရေပြားအရောင်ဆိုးဆေးပါဝင်မှုနှုန်းမတူခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် အာဆီယမ်အရေပြားသည် ဖျားချိန် ထိခိုက်ချိန်တို့တွင် ပိုနက်တတ်သည်။ အရေပြားအခြေအနေကိုနားလည်မှ ထိုသို့နက်ခြင်းကိုထိရောက်စွာကုသနိုင်လိမ့်မည်။
အသားအရည်နက်ခြင်းသည် အရေပြားအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖြစ်သောနေရာတွင် မယ်လနင်များစွာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပုံမှန်ထက်ပိုနက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်သောနေရာအပေါ်မူတည်ပြီး အသားအရေနက်ခြင်းသည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လက် လည်ပင်း နှင့်အဓိကအာဖြင့်မျက်နှာတွင်အထိဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအခြေအနေကအဖြစ်များပြီး အန္ဓါရယ်မရှိသော်လည်း အာဆီယမ်ထုံးတမ်းအရ အပြစ်အနာမရှိ ကြွေထည်ကဲ့သို့အသားအရည်ကိုကြိုက်သောကြောင့်ဒီအခြေအနေကြောင့်စိတ်ရှုပ်ရတတ်သည်။
မယ်လက်မာ။ ဒီအခြေအေနေကိုနေရောင်ထိပြီး အဓိကမျက်နှာတွင် အညှိရောင်အကွက်များဖြစ်ခြင်းမှစသတိထားမိတတ်သည်။ မယ်လက်မာကို ကိုယ်ဝန်ချိန်ပြရုပ်ဟုခေါတတ်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေသောမိန်းမများ၊ မဟော်မှန်းဖြည့်စွက်ဆေးသောက်နေသူများ သို့မဟုတ် သန္ဓေတားဆေးသောက်နေသူများတွင်အဖြစ်များသည်။ မယ်လက်မာသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးပါက သူ့အလိုလိုပျောက်သွားတတ်သည်။ သို့သော် ဒီအခြေအနေသည်မည်သူမဆိုတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အသက်အလယ်အလတ် အရေပြားအရောင်နက်သူများတွင်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောညွန်ကြားချက်ပါသောလိမ်းဆေးများဖြင့်ကုသနိုင်သည်။
နေရောင်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်း။ အရင်ထဲကနက်နေသောနေရာတွင်ပိုမဲလာခြင်းက နေရောင်ကြောင့်အဓိကဖြစ်နိုင်သည်။ အာဆီယမ်အရေပြားပေါ်တွင် အမဲစက်ဖြစ်စေသော အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်လဲဖြစ်သည်။ နေရောင်ထိခြင်ကြောင့်မယ်လက်မာကိုပိုဆိုးစေသည်။
အယောင်ကျပြီး အသားအရေနက်ကျန်ခဲ့ခြင်း(ပီအိုင်အိပ်) မယ်လနင်များသော အာဆီယမ်အသားအရေတွင်ဖြစ်တတ်သည် အရေပြားအရောင်မူမမှန်သည့်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အရေပြားတွင်ထိခိုက်မိသော သို့မဟုတ်ယောင်သောအခြေအနေ -ဝက်ခြ့နှင်းခူ မီးလောင်ခြင်း ဆိုလာရီအေးစစ်သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်မိခြင်း-တို့ကြောင့် အရောင်ဆိုးဆေးအထုတ်များပြီး အမဲစက်များဖြစ်စေတတ်သည်။ တခါတရ့ အရေပြးအထူးကုသမှုများလုပ်နေရာမှစဖြစ်တတ်သည်။ ကံကောင်းစွာ အရေပြားပြန်လဲသောအခါတွင်ပြန်သက်သာသွားတတ်သော်လည်း အနာကျက်သောကာလက လအနည်းငယ်ထိကြာနိုင်သည်။ ကောင်းသောအချက်မှာ ပီအိုင်အိပ်သည် ကုသမှုကိုကောင်းစွာတုံပြန်သည်။
ထိုပြင် အချို့သောအခြေအနေများ ဥပမာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ် အဒီဆန်ရောဂါ(အရီနယ် အရည်အိတ်မကောင်းခြင်း)ကြောင့် မယ်လနင်ကိုပိုထွက်စေပြီး အသားအရေပိုနက်စေသည်။ ဆေးများ အချို့ပိုးသတ်ဆေးများ က မယ်လနင်ထုတ်ခြင်းကို အရေပြားပုံစံမျိုးစုံ အဓိကအားဖြင့် အာဆီယမ်အရေပြားများတွင်များစေသည်။
နုပြိုသော စွဲဆောင်မှုရှိသောပုံစံဖြစ်ရန် ဂရုစိုက်မှုပုံစံလိုအပ်သည်။ အာဆီယမ်အရေပြား၏ကောင်းသောအချက်တစ်ချက်မှာ စောစီးစွာ အသက်ကြီးပုံပေါက်ခြင်းကိုနည်းစေသည်။ သို့သော် အရေပြားပုံစံအရ အသားရေ အရောင်မညီခြင်းသည် အဓိကအရေပြားပြသာနာဖြစ်ပြိး အမျိုးသမီးတော်တော်များများထိုအကြောင်းကိုပြောသည်။ ထိုသို့အရေပြားအရောင်နက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။
ပထမဥိးဆုံး အရေပြားကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ နေရောင်တွင်အလုပ်လုပ်သောအချိန်ကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ နေရောင်ကာကွယ်သောဆေး(အက်ပီအက်ဖ် များသော-အနည်းဆုံး အက်ပီအက်ဖ် ၁၅ +)ကိုသုံးခြင်းကြောင့် အသားအရေနက်ဖြင်းဖြစ်နှုန်းကိုလျော့ချပေပြီး ရှိပြီးသားအမဲစက်များကိုပိုမဆိုးလာအောင်ကာကွယ်ပေးသည်။ နေရောင်ကာကွယ်သောဆေးတခုတည်းဖြင့် မကာကွယ်သင့်ပါ။ အာဆိယမ်တိုင်းပြည် ဥပမာ ဗီယမ်နမ်ရှိအမျိုးသမီးများသည် နေရောင်ကာကွယ်သောဆေးဖြင့်သာမက မျက်နှာဖုံးများ အင်္ကျိလက်ရှည်များဝတ်ခြင်းဖြင့်လည်းကာကွယ်ကြသည်။
ဒုတိယအနေဖြင့် အစားအသောက်ကောင်းစွာစားခြင်းကလဲ အသားအရေလှပစေရန်လိုအပ်ကြောင်းသိသင့်သည်။ ထိုပြင် မှန်ကန်သောအစားအသောက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းကြောင့် အသားအရေနက်သောပြသာနာမျိားကိုသက်သာစေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ အန္ဓါရယ်ရျိသောအဆိပ်ကိုဖယ်ပေးသည့် ဓါတုဓါတ်တိုးပစ္စည်းဆန့်ကျင်သော်အရာများကအကူအညီဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအဆိပ်များက ယောင်ယမ်းခြင်းဖြစ်စေခြင်း အခြားအရေပြားအခြေအနေများကိုဖြစ်စေခြင်းဖြင့် မညီညာသောအသားအရေအရောင်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် သင်တွင် ခြောက်သွေ့သော ခံစားလွယ်သောအသက်ကြီးလွယ်သောအသားအရည်ရှိပါက အရေပြားခွာသောကုထုံးကိုတစ်ပါတ်တစ်ခါနှစ်ခါခန့်လုပ်သင့်သည်။ အရေပြားအဆီပြန်မှုနှင့်တွဲပါက တစ်ပါတ်နှစ်ခါသုံးခါလုပ်သင့်သည်။ အရေးကြီးဆုံးက အပြင်းထန်သောအရေပြားခွာကုထုံးသုံးခြင်းက အရေပြားမပျက်စီးစေပဲ အသစ်ဖြစ်စေသည်။
အသားအရည်ပိုနက်ခြင်းသည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အာဆီယမ်အရည်ပြားသည် အယောင်သဖြင့် အရေပြားဂရုစိုက်သည့်ပစ္စည်းများရွေးချယ်ရာတွင် သင်အများကြီးပိုဂရုစိုက်သင့်သည်။
Dermatologist shines light on natural ingredients used in new topical treatments for hyperpigmentation. https://www.aad.org/media/news-releases/dermatologist-shines-light-on-natural-ingredients-used-in-new-topical-treatments-for-hyperpigmentation. Accessed July 12,2016.
Hyperpigmentation, Hypopigmentation, and Your Skin. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hyperpigmentation-hypopigmentation#2 Accessed July 12, 2016.
How to Fight Dark Spots on Your Skin. http://www.webmd.com/beauty/face/dark-spots-skin-hyperpigmentation Accessed July 12, 2016.
Skin Conditions in Dark Skin. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/skin-conditions-people-with-dark-skin?page=1 Accessed July 12, 2016.